Sunday December 16, 2018 - 11:49:11 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Wasiirka dalxiiska Canada Melanie Joly wuxuu qorsheynaayay inuu booqdo Beijing si uu uga qaybgalo xafladda xiritaanka 'Canada-China Year of Tourism 2018, laakiin labada dal waxay isku raaceen in dib loo dhigo booqashadiisa.
Wasiirka Ganacsiga ee Kanada ayaa dib u dhigay booqashadiisii ​​Shiinaha iyada oo ay jiraan isku dhacyo diblomaasiyadeed oo udhexeeya labada dal ee ku aadan xiritaanka hoggaanka sare ee shirkadda Huawei.
Waa dhacdadii ugu dambaysay oo dhalisay xiisaddo diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal iyada oo suurtogal u ah dagaal ganacsi oo u dhaxeeya China iyo Maraykanka in ay ku lug leedahay.
Dhibaatada ayaa bilaabatay markii ay mas’uuliyiinta Canada ay xireen Meng Wanzhou, madaxa dhaqaalaha shirkadda Shiinaha ee Huawei.
Meng ayaa lagu sii daayay dammaanad 10 milyan oo doolar ah, Waxaa lagu xiray Vancouver, Maraykanku wuxuu sheegay in ay ganacsi la samaysay Iiraan oo ku xad gudubtay cunaqabateynta ganacsiga Maraykanka ee ka dhanka ah Tehran.
Warbaahinta dalka China ayaa sheegtay in Canada ay dooratay in ay iska indha tirto qawaaniinta caalamiga ah waxayna u hoggaansamaysaa Mareykanka, iyagoo bixinaya sharciga dhaqaale ee Mareykanka.
Michael Spovar, oo ah ganacsade, iyo Michael Kovrig, oo hore u ahaa diplomaasiyiin hore ayaa lagu xiray Shiinaha, iyada oo wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ay sheegtay in ay baaritaan ku socdaan, iyaga oo ka shakisan in ay hayeen hawlo halis gelinaya Shiinaha nabadgelyadiisa, taa oo keentay xiisad aad u weyn oo u dhexeeya labada waddan in ay bilaabato.